काठमाण्डौमा एक करोडपतिकी पत्नी यस्तो पेशामा! भन्छिन्, ‘पतिले मलाई सुख दिन सकेनन्, त्यसैले… – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/काठमाण्डौमा एक करोडपतिकी पत्नी यस्तो पेशामा! भन्छिन्, ‘पतिले मलाई सुख दिन सकेनन्, त्यसैले…
काठमाडौँ मान्छे किन यस्तो काम गर्छ भन्दा अनेक उत्तर आउन सक्छन् । महिलाहरु किन यस पेशामा आउँछन् भन्दा उनीहरुका पनि अलग कथाहरु हुन्छन् । सबैको एकै कथा नहुन सक्छ । धेरैले पैसालाई नै महत्व दिएको पाइन्छ । तर केहीले पैसा भन्दा पर पनि केही हुुन्छ भनेर बताइरहेका हुन्छन् ।
काठमाण्डौंमा सञ्चालन हुने डान्स वा र र म सा ज सेन्टरमा अनैतिक काम हुने गरेको गुनासो बेला बेलामा आउँछ । प्रहरी पनि सक्रिय हुन्छ र पक्राउ गर्छ । त्यहाँ समातिएका महिलाहरुले पनि आफू पैसाको आवश्यकता पूरा गर्न उक्त कार्य गरेको बताउँछन् । तर सबैमा यो कुरा लागु नहुने रहेछ । पछिल्लो उदाहरणले यही देखाएको छ ।
महानगरीय प्रहरीले काठमाडौंमा अव्यवस्थित रूपमा खोलिएका केही क्याबिन रेस्टुराँ, म सा ज र डान्स बारबाट गतिविधि भएको आरोपमा ४० जना महिलालाई पक्राउ गरेको थियो । तीमध्ये ३५ जना विभिन्न उमेरसमूहका महिलालाई हनुमानढोका प्रहरीले पुनस्स्थापनाका लागि रक्षा नेपालमा पठाएको थियो ।
त्यहाँ भएकी एउटी अन्दाजी ४० देखि ४५ वर्षकी लाग्ने महिलाको कुराकानी, उनको हाउभाउ र बोल्ने शैली बेग्लै थियो । उनी हेर्दा एकदमै सम्पन्न परिवारकी देखिन्थिन् । हुनपनि उनी करोडपति परिवारकी रहीछन् । श्रीमान् ठूलो व्यापारी । उनी व्यापारकै सिलसिलामा कहिले भारत, कहिले चीन र कहिले थाइल्यान्ड पुगिरहन्छन् । श्रीमान प्राय जसो घरबाहिर भइरहन्छन् ।
कहिलेकाहीँ घर आए पनि कि ल्यापटप, कि फोन, कि त मोबाइलमा बिजनेस डि ल गर्नमै व्यस्त हुन्छन् । कतिसम्म भने उनका श्रीमान्‌लाई आफ्ना छोराछोरी कति कक्षामा पढिरहेका छन्, त्यो पनि थाहा नभएको उनले बताईन् । ती महिलाका अनुसार छोराछोरी र श्रीमतीले जति मागे पनि पैसा दिन्छन् तर त्यो पैसा केमा खर्च भयो, केही मतलब छैन ।
उनी भन्छिन्, ‘मेरो घरमा नपुग्दो केही छैन । नो क र, हीरामोती, सुनचाँदी, गाडी, बैंक ब्यालेन्स सबै छ। तर, ती सबै कुराले मात्रै नहुँदो रहेछ । ती भएर पनि मेरो श री र को आवश्यकता पूरा भएन ।’ उनको भनाई अनुसार उनका श री र को आवश्यकताहरुलाई उनका श्रीमानले बुझिदिएनन् । उनी अगाडी भन्छिन्,‘पैसाका लागि होइन, श री र को आवश्यकता पूरा गर्न म सा ज पार्लर खोलेकी थिएँ ।